Samachar Batika || News from Nepal » २० तस्विरमा हेर्नुहोस् हट मोडल एलिना रायमाझीलाई (फोटो फिचर)
उक्त गीत को भिडियो कमेडी बेसमा निकै रमाइलो बनेको थियो । मोडल एलिना रायमाझी भन्छिन मलाई हेन्डसम, स्मार्ट र सबैको इज्जत गर्ने केटा मनपर्छ। २०५५ सालमा अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्।
धुम थ्री र हिरो नं. १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले लगभग १ सय ५० वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्
जसले मलाई रुवाउने काम नगरोस्। ग्ला,मर क्षेत्रलाई छोड नभनोस्। युवायुवतीबीच हुने प्रेम कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ, म प्रेम गरेरै विवाह गर्छु। त्यो भयो भने बुझ्न पाइन्छ।
मलाई प्रपोज गर्ने १ हजार जति आए होलान्। म्यासेजमा कहिले विवाह गर्ने बूढी भनेर जिस्क्याउँछन्।
तपाईंलाई कस्ता केटा मन पर्छन्?
सफा, हेन्डसम, स्मार्ट, नरम र सबैको इज्जत गर्ने व्यक्ति मन पर्छ।तर अहिलेको जमानामा माया र इज्जत गर्ने धेरै पाइँदैनन्। राम्रा केटा देख्दा मन कस्तो हुन्छ? मेरो भइदियोस् जस्तो लाग्दैन। तर उसको आनीबानी देख्दा उसलाई सुहाउने केटी मिलोस् भन्ने लाग्छ।
ब्वाई फ्रेन्ड परिवर्तन गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ?
मलाई त्यसो गरेको मन पर्दैन। अहिले गाउँदेखि सहरसम्म यस्तो धेरै देखिन्छ। यसरी परिवर्तन नगरेकै राम्रो। नेपाली रँगमञ्चमा आ आफ्नै भविष्य बनाउन तल्लीनहरूको भिडमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र परिचय बनाउँदै गरेकी पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी मोडल अथवा नायिका हुन एलिना रायमाझी ।
उनि सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय छन् । हेरौ उनका केहि सुन्दर तस्बिर–
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०७:४०